Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo Ka Qeybgalay Munaasabadda Furitaanka Kalfadhiga 5aad Ee Baarlamaanka Uganda “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo Ka Qeybgalay Munaasabadda Furitaanka Kalfadhiga 5aad Ee Baarlamaanka Uganda “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda uga qeybgalay Munaasabadda furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Uganda.
Munaasabadda furitaanka Kalfadhiga Baarlamaanka Uganda oo lagu marti qaaday Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada dalalka Afrika ayaa waxaa sanadkan uu ka gedisnaa sanadihii hore ayadoo goobtana lagu soo bandhigay Baarlamaanka 9aad ee Uganda mudadii uu jiray, waxyaabaha u qabsoomay iyo halka uu hiigsanayo.
Madaxweynaha dalka Uganda Uweri Museveni oo goobta ka jeediyey khudbad dheer ayaa waxa uu ka hadlay hormarka dalkiisa uu gaaray iyo dagaalka ay dalalka gobolka geeska afrika kula jiraan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo uu tilmaamay in Uganda ay si aad ah uga feejigan tahay xiligan weerarro uga yimaada dhanka argigixisada, sidoo kalena waxa uu xusay in Dowladda Uganda ay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Guddoomiyaha guddiga Xuquuqul Insaanka,haweenka iyo carruurta ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaanad Maryan Aweys Jaamac oo ka mid ah wafdiga Guddoomiyaha Baarlamaanka hogaaminayo ayaa u sheegtay warbaahinta in Munaasabadda intii lagu jiray uu Guddoomiye Jawaari la kulmay Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada kasoo qeybgalay.
Maalinnimada berrito ah hadii uu Alle idmo waxaa xarunta Baarlamaanka dalka Uganda oo ku taala magaalada Kampala ka dhici doona kulan ay wada yeelan doonaan Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada Soomaaliya iyo Uganda kaasi oo quseeya iskaashiga iyo xirirka sii xoogeysanaya ee labada Baarlamaan.
Mudanayaal ka tirsan Baarlamanka oo booqday dhaawacyo la keenay Isbitalka Banaadir
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska oo maanta booqaday Abwaan Sangub oo ku xanuunsanaya Muqdisho